ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေ ဘာကြောင့်ပူလာရတာလဲ? — Anycall Mobile
အရင်တုန်းက ဖုန်းတွေဟာ ပုံမှန် ဖုန်းခေါ်ဖို့နဲ့ Messages ပို့တာမျိုးတွေပဲလုပ်လို့ရပါတယ်။
အခုမှာတော့ ဖုန်းတွေဟာ အသေးစား ကွန်ပျူတာပုံစံနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမျိုးစုံကိုလုပ်နိုင်လာပါတယ်။
ကွန်ပျူတာလို လုပ်ဆောင်လာနိုင်ပြီဖြစ်လို့ အပူတက်တဲ့ ပြဿနာတွေဟာလည်း ဖုန်းတိုင်းလိုလိုမှာ ဖြစ်လာပါတယ်။
သင့်ရဲ့ဖုန်းဟာ အရမ်းပူလာပြီး Error Message တွေတက်လာနေလား ? အရမ်းပူလာပြီး ဖုန်းသုံးလို့မရတဲ့ အထိဖြစ်နေလား ?
အဲ့လိုဖုန်းတွေ ဘာကြောင့်ပူလာရတာလဲ ? အဲ့လို့ပူလာရင်ကောဘယ်လိုလုပ်မလဲ ? အဲ့မေးခွန်းရဲ့ အဖြေကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ ဖုန်းပူတဲ့ အခြေအနေတွေကို ကျွန်တော်စပြောပေးသွားပါ့မယ်
ဖုန်းဟာ အနည်းငယ် နွေးလာခြင်း
အခုလိုဖုန်းက အနည်းငယ် နွေးလာတာက သင့်အနေနဲ့ ဖုန်းခေါ်တာမျိုးတွေ ၊ App တစ်ခုခုကိုသုံးတာကြောင့်ဖြစ်လာတာပါ။ အဲ့တာကတော့ ဖုန်းတိုင်းမှာ ပုံမှန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာပါတဲ့ Pocessor, Camera, Screen, Battery, နဲ့ တစ်ခြားအပိုင်းတွေကို သုံးနေပြီဆို သူတို့ဟာ အလုပ်အရမ်းလုပ်ရတဲ့အတွက် သင့်ဖုန်းဟာ အပူတက်လာပါတယ်။ ကွန်ပျုတာမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲ။
ဒါပေမယ့်ကွန်ပျူတာတွေမှာတော့ ထိုအပူကို အေးသွားအောင်လုပ်ပေးမယ့် ပန်ကာတွေတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်၊။ ဖုန်းတွေမှာတော့ အဲ့လိုတပ်လို့မရတဲ့အတွက် အပူကိုလျော့ကျစေဖို့ ဖုန်းထဲက Circuits တွေအပါ်မှာ သီသန့်အလွှာတစ်ခုအုပ်ပေးထားပါတယ်။ အဲ့အတွက် အချိန်အများစုမှာ သင့်ဖုန်းဟာ ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နေမှာဖြစ်ပြီး ဖုန်းရဲ့ အပူချိန်ကလည်းနွေးတာလောက်ပဲရှိပါတယ်။
အဲ့တာကလည်း ဖုန်းကိုပြဿနာအရမ်းမဖြစ်စေပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲ့လိုပူရာကနေ
ဖုန်းဟာ အရမ်းပူလာပြီး ဖုန်း Display မှာ Heat Warning ၊ Stops working ဆိုပြီးပေါ်လာပါတယ်။
နေအလင်းရောင်ကျတဲ့နေရာ ဒါမှမဟုတ် နေပူထဲမှာ ဖုန်းသုံးနေရင် ဖုန်းဟာအရမ်းပူလာတာကို အားလုံးပဲ သတိထားမိကြမှာပါ။ အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် တွေကြောင့်ပါပဲ။ အဲ့လိုပူလာရင်တော့ သတိထားသင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့အပူက သင့်ဖုန်းရဲ့ အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းတွေကိုထိခိုက်စေလို့ပါပဲ။ ဉပမာအနေနဲ့ဆို အားမခံတော့တာမျိုးတွေ ၊ အားသွင်းတာကြာတာမျိုးတွေ ၊ Performace ကျလာတာမျိုးတွေဖြစ်လာပါတယ်။
အခြေအနေအရမ်းဆိုးသွားရင်တော့ ဖုန်းမှန်ကွဲတဲ့အထိ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
အဲ့အတွက် ဖုန်းကိုနေပူနေတဲ့ နေရာ ဒါမှမဟုတ်အပူအရှိန်လွန်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာ ဖုန်းကိုအကြာကြီးပစ်ထားတာမျိုးတွေကို မလုပ်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ အဲ့လိုထားမိခဲ့လို့ ဖုန်းဟာအရမ်းပူနေပြီဆို ချက်ချင်းပဲ အေးပြီး မှောင်တဲ့နေရာမှာဖုန်းကိုသွားထားသင့်ပါတယ်။
၂။ ဖုန်းဟာ အပြင်းအထန်အလုပ်လုပ်ရခြင်း
ဖုန်းတော်တော်များများဟာ ပုံမှန် ဖုန်းခေါ်တာ ၊ Messages ပိုတာ ၊ App တစ်ချို့သုံးတာလောက်နဲ့ လက်ထဲမှာ အရမ်းပူလာတာမျိုးတွေမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့မှာ အပူကိုထိန်းနိုင်တာက အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့သူတို့မှာ Chipests တွေအတွက်အပူကိုထိန်းပေးမယ့် ပန်ကာလည်းမပါဘူး။ အကယ်၍သင့်ဖုန်းဟာ ရာသီဉတုပူတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာမရှိနေဘဲ အရမ်းပူနေတယ်ဆိုရင် အဲ့တာက သင့်ဖုန်းဟာ အပြင်းအထန်အလုပ်လုပ်နေရလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်မှာ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေကြောင့် ဖုန်းဟာအပြင်းအထန်အလုပ်လုပ်နေရလဲဆိုတာကို အောက်မှာဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။
– Apps တွေအများကြီးကိုတစ်ခါတည်းသုံးနေခြင်း
-Games တွေကိုအကြာကြီး ဆော့နေခြင်း
-YouTube နဲ့ Facebook တို့မှာ Video တွေကို အလွန်အကျွံကြည့်ခြင်း
-Bluetooth နဲ့ Device တစ်ခုခုကို ချိတ်သုံးထားခြင်း ဒါမှမဟုတ် Wifi ကိုအကြာကြီးချိတ်သုံးထားခြင်း
-ဖုန်း Screen ရဲ့ Brightness ကို အမြင့်ဆုံးတင်ပြီး သုံးနေခြင်း
-ဖုန်းကင်မရာနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ Videos တွေကို အများအပြားရိုက်ခြင်း
ဒီလိုမျိုးအရမ်းအသုံးများနေရင်သင့်ဖုန်းဟာ ပူလာမှာကတော့ အသေအချာပါပဲ။
သင့်ဖုန်းဟာ ဘာအကြောင်းမှမရှိဘဲ အရမ်းပူနေပြီဆို အဲ့တာကတော့ Malware ( အနှောက်အယှက်ပေးတဲ့ Software တစ်ခု) ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Desktop တွေနဲ့ Laptops တွေမှာ ဝင်တဲ့ Viruses က သူတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကို Shut Down မကျခင်အထိ အဆုံးထိတင်ပေးပါတယ်။
Malware ဟာလည်းဖုန်းတွေမှာ Viruses လိုမျိုး ဆိုးကျိုးပေးပါတယ်။ ဉပ့မာအနေနဲ့ Malware ဟာ
ဖုန်း Processor ကိုအားကုန်အောင် Apps တွေကို Background မှာ Run ပေးနေတတ်ပါတယ်။
အဲ့အတွက် Processor ဟာအရမ်းအလုပ်လုပ်ရလို့ ဖုန်းဟာအရမ်းပူလာပါတယ်။
ဖုန်းထဲကို Malware တွေမဝင်အောင် Apps တွေကို Google Play Store လို စိတ်ချရတဲ့ Stores တွေကနေ Download လုပ်သင့်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ဖုန်းအရမ်းပူတဲ့ ပြဿနာတွေကိုခံစားလာရရင် ဖြေရှင်းလို့ရနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုအောက်မှာ ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။
သင့်ရဲ့ဖုန်းဟာလုံးလုံးပူလာနေပြီပြီဆို ချက်ချင်းပဲ ဖုန်းသုံးတာကိုရပ်လိုက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ ဖုန်းကိုအေးပြီး မှောင်တဲ့တစ်နေရာကိုထားလိုက်ပါ။ အဲ့လိုနေရာမျိုးကိုထားရတဲ့ အကြောင်းကတော့ ဖုန်းကို နေရောင်နဲ့တိုက်ရိုက်မထိတွေ့စေနိုင်အောင်လို့ပါ။
ဖုန်းကို Cover တက်ထားရင်ချွတ်လိုက်ပါ
ဖုန်း Cases ဒါမှမဟုတ် Cover တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းတွေ မထိခိုက်အောင်လုပ်ပေးရာမှာ တော်တော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေဟာလေးဝင်လေထွက်တော့မကောင်းတဲ့ အတွက် Cases တွေဟာ ဖုန်းကထွက်လာတဲ့အပူကို သိမ်းထားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ အဲ့တာကြောင်း သင့်ဖုန်းဟာ အရမ်းပူနေပြီဆို ဖုန်းရဲ့ Case ကိုချွတ်ပေးသင့်ပါတယ်။
Airplane Mode ကိုဖွင့်ပါ
သင့်ရဲ့ဖုန်းဟာ အပေါ်ကအချက်တွေလုပ်ပေးထားတာတောင်ပူနေတုန်းပဲဆိုရင် Processor ကိုအားစားစေတဲ့ Wifi ဒါမှမဟုတ် Bluetooth Connections တွေကို ပိတ်ဖို့ Airplane Mode ကိုဖွင့်ထားသင့်ပါတယ်။
Background Apps တွေ အားလုံးကိုပိတ်ပါ
ဖုန်းအားပူရတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုကတော့ Background မှာ Run နေတဲ့ Apps တွေကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အားလုံးဟာ Apps တစ်ခုခုထဲကို ဝင်ပြီး ပြန်ထွက်တဲ့အခါ ထို Apps တွေကိုမပိတ်ပဲ Home Screen ကို ပြန်ထွက်တတ်ကြပါတယ်။ အဲ့လိုနဲ့ Background မှာ မလိုအပ်တဲံ့ Apps တွေပြည့်နေတတ်ပါတဲ့။ အခုအချက်ကိုဖတ်ပြီးရင် အဲ့လို Apps တွေပိတ်ဖို့ မမေ့ပါစေနဲ့လို့ ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်။
တက်ကျွမ်းတဲ့ Technicians တွေနဲ့ပြပါ
သင့်ရဲ့ဖုန်းဟာ ပူပြင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင် ၊ ဖုန်းအလွန်အကျွံသုံးခြင်း ၊ Malware တွေကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ပူလာနေပြီဆိုရင်တော့ ဖုန်းထဲမှာပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ချို့ ချို့ယွင်းနေတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဉပမာအနေနဲ့ပြောရရင် ဖုန်းတစ်ချို့မှာပါတဲ့ Lithium Batteries တွေဟာ သူတို့ရဲ့အနားမှာ အရာတစ်ခုခုရှိနေရင် အပူလွန်ကဲလာတတ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သင့်ဖုန်းရဲ့ Charger ချို့ယွင်းတာကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီးဆို တက်ကျွမ်းတဲ့ Technicians နဲ့ပြပြီး ဖုန်းကိုပြင်သင့်ပါတယ်။
သင့်ဖုန်းဟာ အပူးလွန်တာမျိုးတွေမရှိခဲ့ရင်တောင် အပေါ်ကအချက်တွေကိုတော့ သိထားသင့်ပါတယ်။
အခုလောက်ဆို သင့်အနေနဲ့ ဖုန်းတွေဘာကြောင့်ပူတာတဲ့အကြောင်းနဲ့ အဲ့လိုပူလာရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို သိလောက်ပြီလို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။
China မှာတင်ရောင်းချနေပြီဖြစ်တဲ့ K30 Pro 5G ရဲ့ Aqua Skylight Edition